သမ္မတအိုဘားမား၏ နိုဘဲလ်ဆုလက်ခံမိန့်ခွန်း (နောက်ဆုံးပိုင်း) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » သမ္မတအိုဘားမား၏ နိုဘဲလ်ဆုလက်ခံမိန့်ခွန်း (နောက်ဆုံးပိုင်း)
သမ္မတအိုဘားမား၏ နိုဘဲလ်ဆုလက်ခံမိန့်ခွန်း (နောက်ဆုံးပိုင်း)
Posted by Dave on Dec 22, 2009 in Politics, Issues, Press Announcements |0comments
တတိယအနေနဲ့ပြောရရင် တရားမျှတတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ မြို့ပြနဲ့ နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေ ပါဝင်နေကြ ပါတယ်။စီးပွားရေး၊လုံခြုံမှုနဲ့ အခွင့်အလန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ဆိုတာ ကြောက်ရွံ့ခြင်းက ကင်းလွတ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ချို့တဲ့မှုကလည်း ကင်းလွတ်ဖို့လိုပါတယ်။
အကြွင်းမဲ့မှန်ကန်တာကတော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ လုံခြုံမှုမရှိဘဲ အခြေတည်အမြစ်တွယ်ခဲပါတယ်။အလားတူပဲ လုံခြုံရေးဆိုတာ လူသားတွေမှာ လုံလောက်တဲ့အစားအစာ၊သန့်ရှင်းတဲ့ရေ၊သူတို့ရှင်သန်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါး မရှိဘဲ ဖြစ်တည်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ကလေးသူငယ်တွေ တူတူတန်တန်ပညာသင်ယူခွင့်မရှိတဲ့နေရာ၊ မိသားစုအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အလုပ်မရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်း ဖြစ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မျှော်လင့်ချက်မရှိခြင်းဟာလည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို ဆွဲထုတ်ကယ်တင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် လယ်သမားတွေကိုကူညီခြင်းက သူတို့ရဲ့လူထုကို ကျွေးမွေးရာရောက်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေ ကို ပညာသင်ကြားပေးဖို့ လူနာတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ နိုင်ငံတွေကိုကူညီတာဟာ လှူဒါန်းတာ သက် သက်ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ ဒါကြောင့်ပဲ ကမာကြီးအနေနဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်ရာမှာလည်း ပေါင်းစည်းကြဖို့လိုပါတယ်။သိပံပိုင်းဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုက မပြောပလောက် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင် မိုးခေါင်ရေရှားမှု၊ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနဲ့ လူအစုအပြုံလိုက် ပြောင်းရွှေ့မှု တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အပြင် ဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီး ပိုမိုရှုတ်ထွေး လာစေနိုင်ပါတယ်။ မြန်မြန်သွက်သွက် ဖိအားပေးလုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက် သိပံပညာရှင်တွေနဲ့အရေးဆိုလှုပ်ရှားသူတွေတင်မကဘဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိန်းညှိဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်နားလည်ကြသူတွေကလည်း ဒါကိုထောက်ပြလာကြပါတယ်။
နိုင်ငံတွေကြားကသဘောတူညီချက်တွေ၊ခိုင်မာစွာဆုံးဖြတ်လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ထောက်ခံခြင်း၊ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အဲဒါတွေအားလုံးဟာ သမ္မတကင်နေဒီပြောခဲ့တဲ့ အဆင့် ဆင့်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်ထွန်းဖို့ မရှိမဖြစ်တဲ့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေ့ဒီမျှတည်ရှိနေတဲ့ အင်အား၊ဆန္ဒ အစရှိတာတွေလောက်နဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်မယုံကြည်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားစိတ်ကူးစိတ်သန်းကို ရှေ့ဆက်ချဲ့ထွင်ကြရပါဦးမယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံး မလျှော့စတမ်း မျှဝေလုပ်ဆောင်သွားကြရမှာပါ။
ကမ္ဘာကြီးဟာ ပိုမိုသေးငယ်လာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအချင်းချင်း ဘယ်လောက်တူညီကြသလဲ ဆိုတာ သတိပြုမိဖို့ ပိုပြီးလွယ်ကူလာပါလမ့်မယ်။အခြေခံအားဖြင့်တူညီတဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အလိုရှိ ကြတာ နားလည်လာကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိသားစုတွေအတွက် ပျော်ရွှင်မှု၊ပြည့်စုံမှုအတိုင်းအတာတွေပြည့်မီဖို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးရလာကြ ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့လည်းပဲ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းခြင်းသဘော၊ခေတ်မီခြင်းကို ယဉ်ကျေးမှုအရအဆင့်ခွဲခြင်း သဘောတွေ မရှိကြတော့ဘူးဆိုရင် လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့လူမျိုး၊မျိုးနွယ်စု ပြီးတော့ စွမ်းအားအကြီးဆုံးဖြစ်နိုင် တာက သူတို့ရဲ့ဘာသာတရား အစရှိတဲ့ သူတို့အထူးတလည်အမှတ်အသားပြုတာတွေအပေါ် ခုံမင်မြတ်နိုးမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရွံ့စရာမလိုတော့မှာကို အံ့သြခြင်းအလျဉ်းမရှိဘဲ တွေ့ ကြုံလာရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသလိုမျိုးတောင် ခံစားရပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ တွေ့ ရတယ်။အာရပ်နဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကြားမှာ တင်းမာမှုက ပိုပြီးကြီးမားလာသလိုပါပဲ။ မျိုးနွယ်စုလမ်းကြောင်းတွေ သွေဖည်သွားတဲ့နိုင်ငံများမှာလည်း တွေ့ ရပြန်ပါတယ်။
အန္တရာယ်အကြီးဆုံးကတော့ အပြစ်ကင်းမဲ့သူတွေကို ဘာသာရေးခုတုံးလုပ်ပြီး သတ်ဖြတ်ကြတဲ့ကိစပါပဲ။ ကြီးမြတ်တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာတရားကိုခုတုံးလုပ်ကြသူတွေပါ။အာဖဂန်နစ္စတန်ကနေ ကျွန်တော့်နိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီအစွန်းရောက်တွေဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီး သတ်ဖြတ်ကြ သူတွေထဲမှာ ပထမဆုံးတော့မဟုတ်ကြပါဘူး။ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေရဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို များပြားစွာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ဒါပေမယ့် ဘယ်ဘာသာရေးစစ်ပွဲမှ တရားမျှတတဲ့စစ်ပွဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ကို အမှတ်ထင်ထင်ရှိစေပါတယ်။ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ဘုရားအလိုတော်ကျဖို့အတွက်လုပ်ဆောင် တာဖြစ်တယ်လို့ အမှန်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ဘာမှ တွန့်ဆုတ်မနေနဲ့လေ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကို လည်း ချမ်းသာမပေးနဲ့။ဆေးကုပေးသူကိုလည်း ချန်မထားနဲ့။သူ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တာလည်း အလွတ်မပေးနဲ့ပေါ့။ဒီလိုဘာသာရေးကိုပဲကွက်ပြီးမြင်တဲ့အမြင်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ဘာသာတရားကြီးတိုင်းရဲ့ရင်ထဲအသည်းထဲမှာ စွဲထင်နေတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့က သူတစ်ပါးကိုထိပါးရင် သူတို့ဖက်ကလည်း တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။
ဒီလိုမေတ္တာရောင်ပြန်သဘောက လူ့သဘာဝရဲ့ အမာခံအားပြိုင်မှုကို အမြဲဖြစ်ပေါ်နေစေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျရှုံးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ အမှားတွေကို ပြုလုပ်ကြတယ်။ပြီးတော့ မာန် မာန၊အင်အား တစ်ခါတစ်ရံမှာ မိစ္ဆာတွေရဲ့ ဖြားယောင်းမှုအထွေထွေကို မရှုမလှခံကြရတယ်။အကောင်းဆုံးကို ရည်မှန်းထားတာတွေရှိတာတောင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှောက်ကအမှားတွေကို မှန်အောင်ပြုလုပ်ရာမှာ အရှုံးပေးနေကြရတယ်။
ဒါပေမယ့် လူသားရဲ့အခြေအနေဟာ ပြီးပြည့်စုံလာနိုင်သေးတယ်လို့ ယုံကြည်ဖို့ရာ လူ့သဘာဝဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ယူဆလို့မရပါဘူး။ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်နေရာကို ဖန်တီး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေကို ရောက်ရှိစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ စံပြုထိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ လောကမှာ နေထိုင်ရှင်သန်ကြရမယ်လို့လည်း ယူဆလို့မရပါဘူး။ဂန္ဒီနဲ့ကင်းတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သုံး ခဲ့ကြတဲ့ အကြမ်းမဖက်ရေးဝါဒဟာ အခြေအနေတိုင်းမှာ လက်တွေ့မကျနိုင်ပါဘူးမေတ္တာတရားအကြောင်း သူတို့ဟောကြားခဲ့တာမှန်ပါတယ်။သူတို့ဟာ လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လမ်းပြကြယ်တော့ အစဉ်ထာဝရဖြစ်နေမှာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရသင့်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဆီသို့သာ အရောက်လှမ်းသွားကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့အသက် ၀ိညာဉ် တစ်ခုစီတိုင်းထဲမှာ မွှေနှောက်နေတဲ့ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မှုကို တောက်ပနေစေကြပါစို့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့ မှာရှိခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေလိုပဲ အဲဒီအနာဂတ်ကို ကျွန်တော်တို့ ငြင်းဆန်ရပါလိမ့်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက ဒီအခမ်းအနားမှာ ဒေါက်တာကင်းပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။“သမိုင်းရဲ့ မရှင်းလင်း မှုတွေကို နောက်ဆုံးတုံ့ပြန်ရာမှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှုကို လက်ခံဖို့ ကျွန်တော်ငြင်းဆိုပါတယ်။သူ့ကို အမြဲတစေထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေတဲ့ ထာဝရခက်ခဲမှုကို ကိုယ်ကျင့်တရားစံအရ မရောက်ရှိနိုင်စေတဲ့ လူရဲ့ လက်ရှိသဘာဝအရှိတရားကို လက်ခံဖို့ကျွန်တော်ငြင်းဆိုပါတယ်။´´လို့ ပြောခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရသင့်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဆီသို့သာ အရောက်လှမ်းသွားကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့ အသက်ဝိညာဉ် တစ်ခုစီတိုင်းထဲမှာ မွှေနှောက်နေတဲ့ မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မှုကို တောက်ပနေစေကြပါစို့။ယနေ့ခေတ် အခုလိုဒီနေရာမှာရော နေရာတချို့ မှာပါ စစ်သားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကို သေနတ်တပ်ဆင်ပေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ သူဟာ မားမားမတ်မတ်ရပ်လို့နေပါတယ်။ယနေ့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာရှိတဲ့ နေရာတချို့ မှာ လူငယ်ဆန္ဒပြသူတစ်ယောက်ဟာ သူ့အစိုးရက ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှာကို စောင့်မျှော်နေရတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့မှာဆက်ပြီးချီတက်ဖို့ သတ္တိရှိနေတယ်။ဒီကနေ့ နေရာတချို့ မှာ မိခင်တစ်ယောက်ဟာ ညှာတာမှုကင်းမဲ့တဲ့ဆင်းရဲမွဲတေမှုကိုရင်ဆိုင်ပြီး ရင်သွေးဖြစ်သူကို သင်ကြားပေးဖို့ အချိန်ယူနေရတယ်။ရက်စက်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေအတွက် တစ်နေရာရှိနေသေးတယ်လို့ ယုံကြည်သူလည်း ရှိတယ်။
သူတို့ကိုစံနမူနာပြအဖြစ် ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သွားကြပါစို့။ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုက ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ အမြဲတမ်းရှိနေဦးမှာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ တရားမျှတမှုအတွက် ကြိုးစားနေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယိုယွင်းခြစားမှုကို မချေဖျက်နိုင်ဘူးဆိုတာ ၀န်ခံကြရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ကြိုးစားနေကြရမှာပါပဲ။စစ်ဖြစ်လာမှာကို ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ကြပေမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေကြရပါလိမ့်မယ်။ဒါကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါဟာ လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံဝတ္ထုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ မျှော်လင့်မှုပါ။ပြီးတော့ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုကာလထဲမှာ ဒါဟာကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။
wwd,taeeJYajym&&if w&m;rQwwJYNidrf;csrf;a&;rSm NrdKYjyeJY EdkifiHa&;tcGifhta&;awG yg0ifaeMu ygw,f/pD;yGm;a&;?vHkjcHKrIeJY tcGifhtvef;vnf;yg0ifygw,f/ppfrSefwJhNidrf;csrf;a&; twGufqdkwm aMumuf&GHYjcif;u uif;vGwf&kHoufoufr[kwfygbl;/csKdUwJhrIuvnf; uif;vGwfzdkYvdkygw,f/
tMuGif;rJhrSefuefwmuawmh zGHYNzdK;rI[m vHkjcHKrIr&SdbJ tajcwnftjrpfwG,fcJygw,f/tvm;wlyJ vHkjcHKa&;qdkwm vlom;awGrSm vHkavmufwJhtpm;tpm?oefY&Sif;wJha&?olwdkY&SifoefzdkYvdktyfwJhaq;0g; r&SdbJ jzpfwnfEdkifjcif;r&Sdygbl;/uav;oli,fawG wlwlwefwefynmoif,lcGifhr&SdwJhae&m? rdom;pktwGufaxmufyHhEdkifwJhtvkyfr&SdwJhae&mawGrSmvnf; jzpfwnfEdkifrSmr[kwfygbl;/ arQmfvifhcsufr&Sdjcif;[mvnf; vlYtzGJYtpnf;wpf&yfudk qGJxkwfu,fwif EdkifrSm r[kwfygbl;/
‘gaMumifh v,form;awGudkulnDjcif;u olwdkY&JYvlxkudk auR;arG;&ma&mufygw,f/uav;oli,fawG udk ynmoifMum;ay;zdkY vlemawGudkjyKpkapmifha&Smufay;zdkY EdkifiHawGudkulnDwm[m vSL’gef;wm ouf oufxufydkaumif;ygw,f/NyD;awmh ‘gaMumifhyJ urmBuD;taeeJY &moDOwkajymif;vJrIudk xdyfwdkuf &ifqdkif&mrSmvnf; aygif;pnf;MuzdkYvdkygw,f/odyHydkif;qdkif&mtjiif;yGm;rIu rajymyavmufygbl;/ uRefawmfwdkY bmrSrvkyfbl;qdk&if rdk;acgifa&&Sm;rI?iwfrGwfacgif;yg;rIeJY vltpktjyHKvdkuf ajymif;a&TUrI awG jzpfay:vmEdkifwJhtjyif q,fpkESpfawGeJYcsDNyD; ydkrdk&IwfaxG;vmapEdkifygw,f/jrefjrefoGufoGuf zdtm;ay;vkyfaqmifMuzdkYtwGuf odyHynm&SifawGeJYta&;qdkvIyf&Sm;olawGwifrubJ uRefawmfwdkY EdkifiHrSm ppfzufacgif;aqmifawGeJY uRefawmfwdkY&JU vHkjcHKa&;udk xdef;nSdzdkY vdktyfw,fqdkwm oabmaygufem;vnfMuolawGuvnf; ‘gudkaxmufjyvmMuygw,f/
EdkifiHawGMum;uoabmwlnDcsufawG?cdkifrmpGmqHk;jzwfvkyfaqmifrIawG?vlYtcGifhta&;awGudk axmufcHjcif;?zGHYNzdK;rItwGuf &if;ESD;jrSKyfESHjcif;? tJ’gawGtm;vHk;[m orwuifae’DajymcJhwJh tqifh qifhajymif;vJrIjzpfpOfBuD;jzpfxGef;zdkY r&SdrjzpfwJh aygif;pyfyg0ifrIawGjzpfygw,f/’Da&GU’DrQwnf&SdaewJh tiftm;?qEtp&SdwmawGavmufeJYawmhjzpfEdkifr,fvdkY uRefawmfr,HkMunfygbl;/uRefawmfwdkY&JU udk,f usifhw&m;pdwful;pdwfoef;udk a&SUqufcsJUxGifMu&ygOD;r,f/uRefawmfwdkYtm;vHk; ravQmhpwrf; rQa0vkyfaqmifoGm;Mu&rSmyg/
urmBuD;[m ydkrdkao;i,fvmwmeJYtrQ uRefawmwdkYvlom;awGtcsif;csif; b,favmufwlnDMuovJ qdkwm owdjyKrdzdkY ydkNyD;vG,fulvmygvrfhr,f/tajccHtm;jzifhwlnDwJht&mawGudk uRefawmfwdkY tvdk&Sd Muwm em;vnfvmMuvdrfhr,f/uRefawmfwdkYudk,fwdkifeJYuRefawmfwdkY&JU rdom;pkawGtwGuf aysmf&TifrI?jynfhpHkrItwdkif;twmawGjynfhrDzdkY uRefawmfwdkYtm;vHk;arQmfvifhEdkifwJh tcGifhta&;&vmMu ygvdrfhr,f/
NyD;awmhvnf;yJ urmvHk;qdkif&maygif;pnf;jcif;oabm?acwfrDjcif;udk ,Ofaus;rIt&tqifhcGJjcif; oabmawG r&SdMuawmhbl;qdk&if vlawG[m olwdkY&JUvlrsKd;?rsKd;EG,fpk NyD;awmh pGrf;tm;tBuD;qHk;jzpfEdkif wmu olwdkY&JUbmomw&m; tp&SdwJh olwdkYtxl;wvnftrSwftom;jyKwmawGtay: cHkrifjrwfEdk;rI eJY ywfoufNyD; pdk;&GHYp&mrvdkawmhrSmudk tHhMojcif;tvsOf;r&SdbJ awGUMuHKvm&ygvdrfhr,f/wpfcgwpf&HrSm uRefawmwdkY[m acwfaemufjyefqGJovdkrsKd;awmifcHpm;&ygw,f/ta&SUtv,fydkif;a’orSm awGU& w,f/tm&yfeJY*sL;vlrsKd;awGMum;rSm wif;rmrIu ydkNyD;BuD;rm;vmovdkygyJ/rsKd;EG,fpkvrf;aMumif;awG aoGznfoGm;wJhEdkifiHrsm;rSmvnf; awGU&jyefygw,f/
tE&m,ftBuD;qHk;uawmh tjypfuif;rJholawGudk bmoma&;ckwHk;vkyfNyD; owfjzwfMuwJhudpygyJ/ BuD;jrwfwJhtpvmrfbmomw&m;udkckwHk;vkyfMuolawGyg/tmz*efepwefuae uRefawmfhEdkifiHudk wdkufcdkufcJhMuw,f/tJ’DtpGef;a&mufawG[m bk&m;ocif&JU emrawmfudkckwHk;vkyfNyD; owfjzwfMu olawGxJrSm yxrqHk;awmhr[kwfMuygbl;/bmoma&;ppfyGJawG&JU &ufpufrIawGudk rsm;jym;pGm rSwfwrf;wifcJhMuNyD;ygNyD/’gayr,fh b,fbmoma&;ppfyGJrS w&m;rQwwJhppfyGJrjzpfEdkifbl;vdkY uRef awmfwdkYudk trSwfxifxif&Sdapygw,f/cifAsm;wdkYtaeeJY bk&m;tvdkawmfuszdkYtwGufvkyfaqmif wmjzpfw,fvdkY trSefwu,f,HkMunfw,fqdk&if bmrS wGefYqkwfraeeJYav/udk,f0efaqmifrdcifudk vnf; csrf;omray;eJY/aq;ukay;oludkvnf; csefrxm;eJY/olYbmomw&m;eJYywfoufwmvnf; tvGwfray;eJYaygh/’Dvdkbmoma&;udkyJuGufNyD;jrifwJhtjrif[m Nidrf;csrf;a&;oabmeJYrqdkifygbl;/ ,HkMunfrIeJYyJqdkifygw,f/bmomw&m;BuD;wdkif;&JU&ifxJtonf;xJrSm pGJxifaewmwpfck&Sdygw,f/ tJ’guawmh uRefawmfwdkYu olwpfyg;udkxdyg;&if olwdkYzufuvnf; wHkYjyefr,fqdkwJh tcsufygyJ/
‘Dvdkarwma&mifjyefoabmu vlYobm0&JU trmcHtm;NydKifrIudk tNrJjzpfay:aeapcJhygw,f/ uRefawmfwdkY[m us&HI;Edkifygw,f/uRefawmfwdkY[m trSm;awGudk jyKvkyfMuw,f/NyD;awmh rmef rme?tiftm; wpfcgwpf&HrSm rdpmawG&JUjzm;a,mif;rItaxGaxGudk r&IrvScHMu&w,f/taumif; qHk;udk &nfrSef;xm;wmawG&Sdwmawmif wpfcgwpf&HrSm uRefawmfwdkYa&SUarSmufutrSm;awGudk rSefatmifjyKvkyf&mrSm t&HI;ay;aeMu&w,f/
‘gayr,fh vlom;&JUtajctae[m NyD;jynfhpHkvmEdkifao;w,fvdkY ,HkMunfzdkY&m vlYobm0[m uRefawmfwdkYtwGuf NyD;jynfhpHkw,fvdkY ,lqvdkYr&ygbl;/ydkrdkaumif;rGefwJhae&mwpfae&mudk zefwD;jyKvkyfEdkifwJh pHowfrSwfcsufawGudk a&muf&SdapzdkY uRefawmfwdkY[m pHjyKxdkufwJh urm avmurSm aexdkif&SifoefMu&r,fvdkYvnf; ,lqvdkYr&ygbl;/*EDeJYuif;wdkYvdk yk*dKvfawGusifhoHk; cJhMuwJhtMurf;rzufa&;0g'[m tajctaewdkif;rSm vufawGUrusEdkifygbl;arwmw&m;taMumif; olwdkYa[mMum;cJhwmrSefygw,f/olwdkY[m vlom;zGHYNzdK;wdk;wufrIudk ,HkMunfcJhMuw,f/uRefawmfwdkY &JUvrf;jyMu,fawmh tpOfxm0&jzpfaerSmygyJ/
‘gaMumifh uRefawmfwdkY&oifhwJhurmBuD;qDodkYom ta&mufvSrf;oGm;MuygpdkY/uRefawmfwdkYtouf 0dnmOf wpfckpDwdkif;xJrSm arTaESmufaewJh jrifhjrwfpifMu,frIudk awmufyaeapMuygpdkY/